Ololaha tallaalka cudurka dabeysha oo la daah furay – Radio Muqdisho
Ololaha tallaalka cudurka dabeysha oo la daah furay
Munasabadda daahfurka ayaa waxaa ka qayb galay Wasiirka caafimaadka , Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Qorsheynta & Iskaashiga caalamiga ah, Isuduwanha Caafimaadka gobolka Banaadir, guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka Qaranka, guddoomiyaha Ururka Haweenka gobolka Banaadir, saraakiisha xarumaha caafimaadka iyo ma’suuliyiin kale.
Ku-simaha Agaasimaha guud Maxamed Cabdi Faarax ayaa sidoo kale ka hadlay heerarka adeega la xiirara ka hortaga cuduradda dilaaga ah ee talaalka looga hortago oo cudurka dabeysha, kaasi uu xusay in la gaarsiyey carruur 42 % taasi xusay in hoos u dhigtay qatarta cudurka dabeysha.
“Waxaa la qaaday tilaabooyin lagu farxi karo carruur badan ayaa la gaarsiiey talaalka ciribtirka dabeysha, waxaa ka howlgala qorshaha ah in ka xorowno cudurka dabeysha shaqaalo aad u sareeyo cadadkooda, waxaa sidoo kale xooga la saaray sidii kor loogu qaadi lahaa fahamka bulshada ee ah fa’iidad talaalka carruurta”ayuu yiri ku-simaha Agaasimaha guud.
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah Cabdullaahi Sheikh Cali Qalocow oo ka hadlay xafladda daah-furka ololaha tallaalaka cudurka dabeysha ayaa sheegay in Wasaaradda qorsheynta ay tirokoob ku samaynaso carruurta talaalka heshay iyo kuwa u baahan in la talaallo kuwasi tiradooda ay gaarayso ilaa saddex Milyan.
Wasiirka caafimaadka & daryeelka bulshadda Drs Xawo Xasan Maxamed oo Marwada Madaxweynaha u magacaawday in ay noqoto Danjire sharfeedka ololaha ciribtirka tallaalka dabeysha ayaa sheegtay in dhamaan la talaaloyo carruurta, isla markaana lala xisabtamayo dadka bixiya talaalka,
Marwada Madaxweynaha dowladda Fedraalka ah ee Soomaaliya Marwo Qamar Cali Cumar oo Wasiirka caafimaadka ay u magacwaday danjire sharafeedka tallaalka ciribtirka dabeysha oo carruurtii ugu horeysay siiyey wajiga labaad ee sannadkaan ayaa xusatay in walidiinta looga fadhiyo sidii ay carruurtooda uga tallaali lahaayeen cudurka dabeysha.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo xariga ka jaray waddo laga dhisay Degmada Dharkeynleey “Sawirro”
Dowladda Soomaaliya oo Hambalyo u dirtay Dowladda iyo Shacabka Jibuuti